10G SFP + Vagadziri | China 10G SFP + Fekitori & Vatengesi
HUA-NET SFP + ZR Transceiver yakagadzirirwa 8.5G / 10G Fiber- Channel uye 10GBE kunyorera.
Iyo transceiver ine zvikamu zviviri: Chikamu chekutumira chinosanganisira inotonhorera EML laser. Uye chikamu chinogashira chine APD photodiode inosanganiswa neTIA. Ma module ese anogutsa kirasi I laser chengetedzo zvinodiwa. HUA-NET SFP + ZR Dhijitari yekuongorora mashandiro anowanikwa kuburikidza ne2-waya serial interface, sezvakatsanangurwa muSFF-8472, iyo inobvumidza chaiyo-nguva yekuwana kune madhizaimendi anoshanda senge tembiricha yetransceiver, laser bias yazvino, inopfuudzwa simba re optical, rakagamuchirwa Optical simba uye transceiver magetsi emagetsi.
HUANET’s HUACxx1XL-CDH1 CWDM 10Gbps SFP + transceiver yakagadzirirwa kutepfenyurisa uye kugashira Optical data pamusoro peimwe mode Optical fiber yehurefu hwekubatanidza 100km. Iyi transceiver ine zvikamu zviviri: Chikamu chekutepfenyura chinosanganisira CWDM EML laser. Uye chikamu chinogashira chine APD photodiode inosanganiswa neTIA. Ma module ese anogutsa kirasi I laser chengetedzo zvinodiwa. Dhijitari yekuongorora mashandiro anowanikwa kuburikidza ne 2-waya serial interface, sezvakatsanangurwa muSFF-8472, iyo inobvumidza chaiyo-nguva yekuwana kune zvishandiso zvinoshandisa madhizaivhu senge transceiver tembiricha, laser bias yazvino, inopfuudzwa simba re optical, rakagashira simba remaoko uye transceiver magetsi emagetsi .
HUASDxx1XL-C (I) D40 Yakagadziriswa Diki Fomu Chinhu Chinogadzirika SFP + ma transceivers akagadzirirwa kushandiswa mu10-Gigabit Ethernet zvinongedzo zvinosvika ku40km pamusoro peSingleMode fiber. Izvo zvinoenderana neSFF- 8431, SFF-8432 uye ITU-T G. 988.1. Iwo ma transceiver dhizaini akagadziridzwa epamusoro kuita uye mutengo unoshanda kupa vatengi mhinduro dzakanakisa dzekufona.
Iyi transceiver ine zvikamu zviviri. Uye chikamu chinogamuchira chine PIN photodiode yakabatanidzwa neTIA. Ma module ese anogutsa kirasi I laser chengetedzo zvinodiwa. Dhijitari yekuongorora mashandiro anowanikwa kuburikidza ne 2-waya serial interface, sezvakatsanangurwa muSFF-8472, iyo inobvumidza chaiyo-nguva yekuwana kune zvishandiso zvinoshandisa madhizaivhu senge transceiver tembiricha, laser bias yazvino, inopfuudzwa simba re optical, rakagashira simba remaoko uye transceiver magetsi emagetsi .
External Modulation Transmitter, Huawei Olt Mutengo, Sfp C ++, Xfp Transceiver, Optical Fiber Module, Huawei Qsfp +,